मानसिक तनाबबाट मुक्त हुन अपनाउनुहोस् यस्ता उपायहरु - ज्ञानविज्ञान
मानसिक तनावका कारण मानिसलाई थुप्रै रोगहरू लाग्न सक्छ । डिप्रेसन, निराशापन, एन्जाइटिक डिसअर्डर, छटपटीको समस्या, त्यस्तै गरेर अनिन्द्राको समस्या हुन्छ । तनावमा मानिसहरूलेले रक्सी, गाजा, बिभिन्न खालका ट्याब्लेटसमेत प्रयोग गर्छन् । धेरै तनाव भयो भने कहिलेकाही रक्सी खानेले पनि धेरै खान्छ । जस्तै भूकम्पका कारणले आफ्नो घर भत्कियो । अब बनाउने उपाए छैन त्यसले गर्दा कतिपए मानिसलाई तनाव भइरहेको छ । त्यस्तै पागलपनको समस्या पनि तनावकै कारण हुन्छ । टाउको दुख्ने समस्या अर्को समस्या हो । अलिकति तनाव भयो टाउको दुखिहाल्ने समस्या पनि हुन्छ कतिपएलाई ।
ग्याष्ट्रिकको दबाइ खाएको छ, तर पेटको समस्या समाधान भएको छैन । दिसा कहिले ढिलो हुने कहिले चाडो हुने भएको छ । हातखुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, कहिले यता दुखे जस्तो कहिले उता दुखेजस्तो लाग्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा जचाउन गयो रिपोर्टमा केही पनि आउदैन । यो सबै तनावका कारणले हुन्छ। शंका लाग्ने, मलाई केही भयोकि भन्ने खालका महसुस हुने हुन्छ । रक्सी चुरोट गाँजा लगायतका कुलतमा फस्ने पनि हुन्छ ।
मानसिक तनावबाट बच्न दुई वटा उपाय छन् । एउटा यसबाट कसरी जोगिने र अर्को यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने हो । सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । जसरी शरीर स्वस्थ्य राख्न हामी व्यायाम गर्छो त्यसैगरी मनको स्वस्थताका लागि पनि काम गर्नुपर्‍यो । आफ्नो विचारलाई कसरी स्वस्थ्य राख्ने ? विचार कतातिर गइरहेको छ । म आज कस्तो छु? मेरो सोचाई कस्तो छ ? म स्वस्थ्य छुकि छैन ? आज म खुसी छुकि छैन ? अलि बढी तनावमा पो छुकि यस्ता कुरा बेलाबेलमा जाच्नुपर्छ ।
पारिवारिक तनाव होकि, व्यवसायिक तनाव होकी, जागीरको तनाव होकी यसलाई पत्ता लगाउनुपर्छ । कसैले मलाई आलोचना गर्‍यो मैले माफी नदिएको होकी जस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो बाहेक निन्द्राको व्यवस्थापन, खानाको व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ । बेलाबेलामा मनोरन्जन आवश्यक छ । आफूले आफूलाई स्वस्थ्य र बलियो बनाउन मैले कुनै रमाइलो र खुसी हुने काम गरेको छुकि छैन भनेर आफूले आफैलाई जाच्नुपर्छ । आफ्नो सबैभन्दा ठूलो डाक्टर आफै हो । त्यसैले मानिसले आफ्नो तनावको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ ।
आधुनिकताले गर्दा व्यक्तीवादी चिन्तन हावी भएको छ । दिनरात काम गर्ने गर्नाले एक दिन पनि मानिसलाई फुर्सद छैन । राति ‘डिउटी’ गर्नेहरुलाई अझै बढी मानसिक तनावको समस्या हुन्छ । बेलाबेलामा साथीभाइ, आफन्तसँग घुम्ने रमाइलो गर्ने गर्नुपर्छ। बिदाको दिनमा आफ्नो कामको तनाव लिनु हुँदैन । आफ्नो विचारलाई बेलाबेलामा जाँच गर्नुपर्छ । यस्ता कुरालाई ध्यान दिने हो भने हामी एन्जाइटी, डिप्रेसनलगायतका समस्याबाट सजिलै बच्न सक्छौ ।
Topics #उपचार #उपायहरु #टेन्सन #मानसिक तनाब
Don't Miss it मधुमेहका रोगी देखि लिएर अन्य थुप्रै रोगीलाई लाभकारी हरियो मकै जानकारी लिनुहाेस्
Up Next यी खानेकुरा, जसले राख्छ मुटुलाई स्वस्थ अत्यन्तै महत्त्वपुर्ण जानकारी